अब्बल विद्यालय | नुवागी
‘पहिला जे कुरामा पनि शिक्षकमा भर पर्ने विद्यार्थी अहिले आफै सबै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गर्छन् । अहिले विद्यार्थीका समस्या विद्यार्थीबीच नै समाधान हुने गरेको छ । र विद्यार्थीका समस्या विद्यार्थीले नै समाधान गर्दा प्रभावकारी पनि हुने रहेछ । यसको निर्माणले विद्यार्थीबीच एकआपसमा सहयोगको भावनाको...
सबिना बानियाँ/ सिन्धुपाल्चोक । अहिले ३ सय १ जना विद्यार्थी पढ्दै गरेको साँगाचोकस्थित रामदेवी माध्यमिक विद्यालयको भित्री वातावरणमात्र हैन, बाहिरी वातावरण पनि सुध्रिएको छ । त्यसरी सुध्रिएको विद्यालयको धेरै परको हैन, जम्माजम्मी ८ वर्ष अघिको विगत हेर्ने हो भने पनि त्यत्ति मज्जाको लाग्दैन ।...
सबिना बानियाँ काभ्रे । पनौतिको कुशादेवी । त्यही ठाउँलाई नामाकरण गरी वि. सं.२०१६ सालबाट सुरु भयो, कुशादेवी स्कुल । त्यो स्कूल वि.सं. २०२९ सालसम्म विद्यालय प्रावि नै भएर अघि बढ्यो । त्यो क्रमले २०३६ सालसम्म निरन्तरता पायो भने, २०३७ सालबाट कुशादेवी निमावि, माविमा फेरियो...
– हरिसुन्दर छुकां / विक्रम सम्वत २०४० सालमा स्थापना भएको भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १, भार्वाचोको गणेश माविले चर्चेको क्षेत्रफल हो, जम्मा १५ आना २ पैसा । त्यही सेरोफेरोभित्र छ, विद्यालयले बनाएको सानाठूला तीन वटा भवन । भवनहरुमा पनि दुईवटा त अझै पनि अधुरै...